Fanadihadiana momba ny akora - Suzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Mombamomba ny BricMaker
Rafitra fanapahana-fitambarana-fitaterana rafitra
Rafitra fametrahana robot
Crushing Machines Series
Andiana milina fampangaroana
Famahanana milina famahanana
Tetikasa Tunnel Kiln
Fanadihadiana momba ny akora
Fanovana ara-dalàna ny fitantanana
Ny akora manta kalitao dia hahomby kokoa. Lavenona manidina, fanamboarana, fako fanamboarana, Shale, silt renirano, tany maloto, Loess, fotaka fiainana, Gangue.
Asa voalohany amin'ny fananganana zavamaniry biriky: Ny fananganana simika ny akora simika sy ny toetra ara-batana (ao anatin'izany ny hafanan'ny fandoroana anaty, sns.), Mandritra izany fotoana izany dia refesina ny hamandoan'ny biriky maitso mamorona sy manala.
Ny famakafakana ny firafitry ny simika dia matetika refesina amin'ny SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, magnesium oxide, solifara gangue, fatiantoka amin'ny ignition sns.
SiO2: avo loatra, ambany loatra ny votoatiny, na dia tsara ho mainaina haingana aza izy, na izany aza ny vokatra vita izay manana tanjaka ambany.
Al2O3: Raha latsaky ny 12% dia mihena ny tanjaky ny mekanika an'ireo vokatra, raha mihoatra ny 24% dia mitombo ny mari-pana mitifitra, mampitombo ny vainafo.
Fe2O3: Ny atiny avo loatra dia hampihena ny vokatra hafahafa, ka miteraka fihenan'ny mari-pana.
CaO ： Manolotra ao amin'ny fanjakan'ny CaCo3 amin'ny akora, sokajiana ho zavatra mampidi-doza, Raha lehibe kokoa noho ny 2mm ny poti-javatra, dia mety hiteraka biriky maratra na vaky rehefa may.
MgO: Arakaraka ny maha kely ny tsara kokoa, raha tsy izany, ny vokatra mitombo mora miteraka maneziôma, miteraka fanala fotsy.
Sulphur Dagan: maha-solifate amin'ny akora fototra, ny atiny dia tsy tokony hihoatra ny 1%. Rehefa mirehitra dia hanao SO2 izy io ary hanimba ny fitaovan'ny tsipika famokarana, manimba ny fahasalaman'ny mpiasa.
Fahaverezana amin'ny afo: Nateraky ny zavamananaina tamin'ny akora. Raha fatiantoka mavesatra kokoa amin'ny fandrehitra, taha tahan'ny lavaka kokoa ho an'ireo vokatra.
Singa simika SiO2 mety 55 ～ 70
Available 55 F80
Al2O3 mety 15 F. 20
Available 10 ～ 25
Fe2O3 mety 4 ～ 10
Available 3 F. 15
CaO Available 0 ～ 10
MgO Available 0 ～ 3
SO3 Available 0 ～ 1
fatiantoka amin'ny ignition Available 3 F. 15
Votoatin'ny fitsaboana ＜ 0,5mm mety 0 ～ 25
2 ～ 0,5mm Available 0 ～ 2
Fandinihana ny fahombiazan'ny vatana: mazàna refesina ny sombintsombiny vita amin'ny plastika, ny fihenan-danja, ny fahatsapana ho maina ary ny fahaizan'ny mpanota.
35 ~ 50%
20 ~ 65%
Plastika: Rehefa ny plastika ao anaty 7 ~ 15, mety indrindra amin'ny fitrandrahana fotaka afovoany.
Mihena: Mihena ny tsipika <6%, raha avo loatra ka tsy mahavaky vokatra, misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny biriky.
Ny fahatsapana ny fanamainana: ny plastika avo lenta avo kokoa, ny faran'izay matevina, ary ny fahatsapana ho maina kokoa. Ny coefficient sensitivity dia mamaritra ny volavolan'ny fanamainana, avo loatra ny antony mahatonga ny vaky biriky maitso.
Fifandraisana amin'ny famoronana atin'ny hamandoana sy ny fahatsapana ho maina
Ny hamandoana vita amin'ny biriky maitso
Ny rano fitsikerana biriky maitso
Coefficient fanamainana fanamainana
Ny famakafakana simika ny akora, ny fananana ara-batana ary ny fanandramana hamandoana ny hamandoana dia manapa-kevitra ny amin'ny fampiasana akora manta ary misy fiantraikany amin'ny famolavolana ny dingana manaraka, ny fisafidianana fitaovana, ny firafitry ny lafaoro, ny kalitaon'ny vokatra ary ny lafiny hafa amin'ny rafitra famokarana.
Vahaolana famolavolana biriky BricMaker Auto
Izahay BricMaker dia matihanina amin'ny famokarana fitaovana vita amin'ny tanimanga (sinteria), ny R&D, ny lafaoro ary ny vahaolana amin'ny biriky fiara. Izahay BricMaker dia manolotra fitaovana avo lenta sy vahaolana teknolojia avo lenta kokoa, hanampiana anao hahazo tombony ara-toekarena lehibe kokoa ary hahatsapa ny lanja fiainanao manokana!
Serivisy an'ny BricMaker